UGoogle wehla waya ngaphantsi kwesiqingatha sexabiso le-USB-C ukuya kwiadaptha yejack | Iindaba zeGajethi
UGoogle wehla waya ngaphantsi kwesiqingatha sexabiso le-USB-C ukuya kwiadaptha yejack
UIgnacio Sala | | Izixhobo, Iiselfowuni
Kunyaka ophelileyo ngexesha lokuboniswa kweePixels zikaGoogle zokuqala, abafana abavela kwiNtaba yokujonga baqhayisa ngokuqhubeka nokubonelela ngehedfoni kwizixhobo zabo zokuqala eziyilwe yinkampani. Kunyaka kamva, inkampani kuye kwafuneka ginya amazwi akhe, kuba isuse ngokupheleleyo i-headphone jack kwiimodeli ezintsha zikaGoogle Pixel.
Sinokusebenzisa ii-headphones zethu zobomi bonke, Nge-USB-C ukuya kwi-3,5 mm iadaptha, iadaptha efakwe kwibhokisi yePixel. Ukuba siyaphulukana nayo, kuya kufuneka sihlawule i-20 yeedola entsha.
Umzali umzali UGoogle wayefuna ukwenza imali ngamahlwempu angenakuze akwazi ukuphulukana nale adaptha, Kuba ixabiso eliphezulu lale adaptha incinci ayenzi ngqondo, kuba yayixabisa iidola ezili-11 ngaphezulu kwesixhobo esinye esibonelelwa yiApple, kodwa ngoqhakamshelwano ngombane kwi3,5 mm jack. UGoogle wehlise ixabiso layo, de ibe lixabiso elifanayo ne-Apple, iidola ezili-9, ukuyibeka ngexabiso elifanelekileyo.
UGoogle akakhange enze naliphi na ingxelo malunga noku, njengoko Ndisazi ukuba akukho sizathu sokunikezela ngeadaptha encinci ngexabiso eliphezulu kangako. Kodwa njengombane ukuya kwi3,5 mm iadaptha ye-iPhone, isivumela kuphela ukuba simamele umculo ngee-headphone ngaphandle kokukwazi ukutshaja isixhobo nangaliphi na ixesha. Ukuba sifuna ukuthatha ithuba kwaye ngelixa simamele umculo, sihlawulisa isixhobo sethu, kufuneka sibhenele kwisixhobo somenzi we-Moshi, esinika iadaptha ye- $ 44,95 esinokubiza ngayo kwaye simamele umculo ngaxeshanye .
Esi sixhobo seMoshi Ixabisa ngaphezulu kwe- $ 10 kunexabiso elilinganayo iBelkin le-iPhone kwiVenkile yeApple, ke kuyabonakala ukuba lo mvelisi naye ngokungenazintloni ufuna ukwenza imali. Nangona abasebenzisi be-iPhone banesixhobo esinye seBelkin kwintengiso, kodwa Yenziwe yiAmazon nge $ 29. Ngokufanelekileyo, iAmazon iya kuphehlelela iadaptha yayo ehambelana nezixhobo ezinonxibelelwano lwe-USB-C kwaye ngaphandle kwesibuko sefowuni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Izixhobo » UGoogle wehla waya ngaphantsi kwesiqingatha sexabiso le-USB-C ukuya kwiadaptha yejack
UJuan Antonio sitsho
Molo, ndingayithenga phi le adaptha? Kwaye enye into, ngaba isebenza ngayo nayiphi na ifowuni ene-USB Type C? Enkosi
Phendula kuJuan Antonio
UMiguel Hernandez sitsho
Molo uJuan Antonio, ngqo kwiVenkile kaGoogle.
Phendula uMiguel Hernández
I-Sony Xperia Touch ihlasela imarike kodwa ngexabiso elingavumelekanga